October 18, 2020 Xuseen 10
Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa booqday dibu dhis balaaran oo lagu sameeyey dekeda magaalada Berbera oo ay gacanta ku hayso shirkadda DP WORLD.
Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland ayaa kormeer ku sameeyey qaybihii hore ee dekedda oo lagu sameeyey dibu habayn balaaran, ayna ka muuqato bilic wanaaagsan.
Dhanka kalena, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wuxuu xariga ka jaray Wiish iyo Taag cusub oo lagu soo kordhiyey shaqada ka socda dekeddaasi.
Arrintaan ayaa ku soo beegmaysa xilli dekedda Boosaaso oo ay gacanta ku hayso shirkadda Dp World ay ku sugan tahay marxaladdii ugu xumayd ayna ka wareegeen maraakiibtii waaweynaa.
Kkkk Faarax Faruq doofaar doofaar dhalay Daanwayne ah, waxaan maqli jiray naaaguhu ninkay jeclaadaan afkooda kama dhamaado mararka qaarna wayba caayaan iyagoo raad gadanaya hada Farax Gaylan kalmaduu dheho waa Dani, bal Illah ayaan idinku dhaarshee u fiirsada qoraadiisa boqolkiiba boqol waa Dani, waxaan maqli jiray habarta odaga wax loo soo saar war naag nin caashaqda waa la arki jiraye dhaqanka Daanwaynuhu malaha waa xaga kale. Waxaaba igasii yaabiyay maalin sii horaysay hadal kumuu ekaane sawirkiisa ayuu kan Dani ku dhinac qabtay oo halkaan soo dhigay taasina waa calaamatul caashaq. Bil xaqiiq markasta uu faarax so mal malooqo cantarabaqashka uu Dani kaga hadlaayo wuxuu u samayn xayaysiis iyo magac.
War qoraago waa ku saxsanyahay,Deni iyo cidina ma daafucu karto,waxay sameeyeen musumaasuq uyo boob hantidii dadwaynaha Puntland.
Deni Dakadaasi bacaadko xiray,oo masuuliyadeeda leeyahay,buu maareeyeye uga dhigay seedigii si loo boobo hantida Dakada.
Deni waxaa uu shatiyo kaluumaysi oo sharcidara ah,oo san Baa magac u yaalka ah la marin uu sii yey shirkado Chinese ah ( Shiinaha) ah oo Deni iyo dulaalintiiso ay la siiyey lacag 3 million oo Dollar.
Gaas waxa si cad af-kiisa uga sheegay in oo lacag
dhan 15 million oo Dollar oo loogo talagalay Dakada uu meel kale u leexiyey taasina waa arin cad oo muujinaysa in wax badan oo lacagtaadi ka mid uu qaatay Gaas.
Waxaa kaloo eeda musumaasuqa qayb wayn ka xildhibaanada iminka iyo kuwii xilgii Gaas oo waxooga af loo mariyey.
War Dakadaasi gacanta reer Bossaso iyo Soomaaliya halago soo celiyo.
Deni iyo xulufadiisa waa in asn laga aamusin oo aysan qabyaalad iyo nin jeclaysi aysan danaha umadda reer Puntland laga aamusin.
Maantay Puntland ma laha Baarlamaan shqeeye ,waayo Deni ayaa keensaday shaqsi la yiraahdo Abwaan oo runtii ah shaabad uu Deni jeebka ku sito.
Cadaalad daro,musumaasuq,boobka hantida dadwaynaha reer Puntland,sicir barar, arimaha caafimaadja ,waxbarashada ,shaqada intuba waa baaba oo waa aad u hooseeya ana asn jirin ba.
War intaasi iyo ks badan oo dhibaata ah baa jirta,ninkii in yar sheega xaqiiqada jirta baa ka aflagaadayn.
Musumaasuq Deni waa in si buuxda loo diido inta hadhow aanan dhibaatada ka timaada asn sahal loo xalin karin.
Abdullahi Duf ku Bax!
War maxaad ku keentay inaad quraaga Faarax aad ka dhigto muraayad laga daawado dhaqanka beeshiisa!
War adiga iyo faarax adiga ayaa gaf ku jira. Beenta Faarax qorayo waxaa ka xun gafka aad ugu jawaabeysaan. Beenta la qoraa waxba ma dhibto markii qofka been lagu barto, waxayna muujinaysaa dowlad wanaagga Puntland ka jira iyo hoggaanka wanaagsan oo xaq dhowraya xorriyadda qofka iyo inuu wuxuu doono qori karo kuna hadli karo.
Ammaan intaas ayaa deni ugu filan waana in la ilaaliyaa Ammaanka Faarax. Wuxuu markhaati isagu ka yahay inuusan cidna ka baqayn.
Faarax waa qoraa ee faraha ka qaada, hana u gafina dadka sharafta badan ee uu ka dhashay
Abdicasiis A Farah says:
Ma aydinaan fahmin, Puntland waxaa u dhashay dad dawlidnimo yaqaan, waana iyaga iyo reer Somaliland wax yaqaan hab dawladeed oo xafiis looga shaqeeyo iyo maamul, ma aha askarinimo iyo qafqaf iyo guulwadeyn waxaan ka hadlayaa. Waxaase Puntland qayrkeed ka reebaya, siyaasiyiintoodu waxay eegayaan dhinacaa iyo Muqdishu, waxay Puntland iyo dadkeedii ka dhigteen , ” Beerkii Qadada Lagu Sugi Jiray” nin kii yimaadaa wuxuu tamar iyo taag hayo wuxuu gelinayaa Xamar sidii uu wax ugu noqon lahaa, oo siyaasadda Somalida u dominent garayn lahaayeen. Meesha Somaliland ay isku tashanayso oo doonayso inny Somali ka go’aan oo wax noqdaan, bal eega adduunka leh naf iyo maal ee aun Abdillaahi Yusuf Ahmed geliyey inuu maruun loogu yeedho madaxweyne, wax maanta la qiyaasi karo maaha, hadda Deni oo u dambepyey waxaa wakhti kaga baxaya hawlaha Somalida waa cajjiib, Laabi Laba U la’, ama Puntland buu madaxweyne ka noqon oo maskaxdiisa gelin ama dee siyaasadda aan fadhiyin ee Xamar buu ku daali, waxana dhici karta in tanna uu dayaco tajna ka gaadhi waayo natiijo midho dhal ah. Inta Puntland labaaa u dhaxayso, waxay iska noqonaysaa meel dayacan oo lagu muraadsado ama jaran-jar lagu fuulo meel kale.
Jawahir Xayir says:
Nin kan anigu reere uu u dhashay maba aqaan laakiin Deni in uu ku waashay cidna daah kama saarna. Haddii qof HINDHISO waa in uu ku lamaaniyo Deni. Aniga waxaan u fasirtay si kale. Waxa uu aad u amaani jiray una mashxaradi jiray Cabdiwali Gaas oo lacag ku siin jiray inuu u ALALAASO Dani waa ka diiday in uu shilinka umadda ku bixiyo in la amaano ama loo mashxarado. Adeer hawshaada raqiiska ah wado. Lagu arag.
maxamud saleman waa xasid waxuudu waa gumaysi lakiin hada dadku waa ilbaxay lacagna waa la wada haystaaa taas ogaada laakin mardhow sheekadu waa is badalaysaa inshallah:
War arinto na aha qabiil iyo beel,oo waa in aan runta laga xushoon,Deni iyo Gaas cidina ma daafic karto,waa cad oo banaanja yaala musumaasuqii ay ku ka ceen.
Deni waxa uu ku shaqeeya eex,qaraabo kiil iyo qoys hoise oo uu baas nuuhuyi oo ah xadgub ku ah,hanaanka maamul oo ku dhisan cadaalad iyo in aan awooda lago hekun xoolo xaaraan ah.
Gaas waa in la baaro lacagtii uu is cad afgiisa ka sheegay in oo 15 Million oo Dollar oo loogo talagay Dakada maantay bacaadko xiray uu meel kale u leexiyey,waa in shacabka Puntland xisaab celin dhab ah arintaasi laga siiyo.
Shaki kuma jiro in wax la musumaasuqay,waa danbi wayn oo u u baahan in la baaro.
Deni lacag 3 Million oo Dollar ah buu ka qaatay shirkado kaluumaysi oo dalka China ( shiinaha) laga leeyahay musumaasuqaasi waa in la baaro.
Dakada Bossaso oo iminka halis u ah in ay xiranto ka danbow markii ay ciid buuxisay.
Dakada Bossaso si loo boobo hantida dadwaynaha reer Puntland waxaa maareeye ka dhigay Seedigii oo
wuxuu doono sameeya cidina aanay musumaasuqiisa baari karin ama ka hadli karin.
Puntland maantay waxwalba waa joogsadeen oo dadkiina waa ja nitad jabeen suda wax u socdaan.
Gunaanadkii waa in aan laga aamusin ku tumashada wixii lago heshiiyey iyo in Deni iyo kooxdiisa aanay sharciga ka sarayn oo ay banaantay in si cad dadko figradahooda u soi soo heediyaan kana tashadaan in aanay waxani sii socon.
Sicir barar,dhaqaalihii Puntland oo burburay,shaqo la’aan baahsan,cadaalad daro,in yar oo dhiiga dadka reer Puntland ku nool oo aan inaba is lahayn xisaab baa iman.
Pun maantay ma laha gole Baarlamaan oo waxaa baabi’yey Deni.wixii uu doono ayuu ku kacaa,isagaa ah madaxa maamulka iyo sharci dajinta,waayo Abwaan waa shaabad uu Deni jeebka ku sito.
Maxkamada sare ma shaqayso,hantidhowr shaqeeya ma jiro
taasina waa guuldarooyinka haysta maantay dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya.
daan wayne says:
daanwayne hadaa nahay jifo kursi iska haysata marabo waxaa donaa qoraynaa 💉
Adeer Dani Puntland isagaa leh daanwayne Iyo qadaad wayn toona wax laga waydiinmaayo, waxaan filayaa yar yarka Puntland nabada iyo ixtiraamka fiican ee ay madaxda Puntland siiso ayay ku daaca qurmeen kuna kibreen, hadii sida muuse biixi qol lagu handraabi lahaa guryahooda iyo bogcadahoodana maalin cad laga qaadi lahaa sida Hargaysa ka jidha Faarax faaruq iyo kuwa la midka ahi way wada sacbinlahaayeen, balse gobanimada iyo aqoonta ay leeyihiin ayaan siinayn madaxda Puntland inay u dhaqmaan siduu u dhaqmo muuse biixi. Inangumeed walbaa hayska caytamo cuqdada caloosha idinka buuxdaa waa mid aad u bakhtindoontaan bil xaqiiqa.
Dhaliishu waa caadi balse waxaa xusid mudan dekada Bosaso yaa wareejiyay o eedeeda leh, yaa 20 milyan dollars qaatay? Dekada Bosaso Gaas ayaa lahaa heshiiskeeda iyo wareejinteeda xaqul qalina ku qaatay, waxaa xusid mudan qoraaga hada ku dhaliilaya Dani dekeda Bosaso waagaas inuu ahaa ama page kani ahaa afka Madaxwayne Gaas aadna ugu amaani jiray mashruucaas wareejinta dekada Bosaso isagoo sheegi jiray inay tahay guul taarikhi ah!! . History repeats itself taariikhdu iyadaa isoo celisa waan hayaa qoraalada Gaylan ee u ku difaacayay wareejinta dekeda Bosaso barigaas. Waagaas Dani ma joogin lamana aqoon waxay ahayd 2017 kii, bil xaqiiq Dani wuxuu dhaxlay meel maran oo aan waxba oolayn, ciidan nidaamsan ma jirin amni ma jirin dowladnimo shaqaysaa ma jirin, ishii dhaqaalaha ee Puntland lahayd oo dekada Bosaso ahayd waa taas Dpworld lagu wareejiyay hadana saas oo ay tahay waa raftay waa kaas dhisay ciidan tayo leh oo tirio kooban, waa kaas amnigii Gaslkacayo iyo Bosaso meel saaray, waa kaas soo celiyay maqaamkii iyo miisaankii Puntland ku lahayd somaliya Farmaajana futada dhulka ugu dhuftay. Arinta dekeda waxaan qabaa Dani waxa uu rabaa in dhinaca shirkada ay wax ka fuliwaayaan sidaasna uu heshiisku ku buro oo aysan xaga Puntland ciladi ka iman, sababtu waxa weye UAE waa dalka kaliya ee Puntland siiya kaalmo military iyo tababar ciidan kaas oo ay Puntland u qabto baahi aad u wayn madaama ay Puntland leedahay cadow badan oo noocyo badan, sidoo kale UAE iyo Puntland waxaa ka dhexeeya xiriir fog oo ganacsi Puntland na ma dhumin kadho. Xiriirkaas wuxuu leeyahay cadow badan oo ay ugu wayntahay dowlada Qadar oo ah aabaha iyo hooyada argagixisada saaxiib na la ah villa somaaliya waxaad ogtihiin dilkii agaasimihii paul ee shirkadaas DpWorld in Qadar ka danbaysay iyadoo usoo martay villa wardhiigley iyo fahad yaasiin oo New York times qoray in CID America qabatay codad lays dhaafsaday, sababta waxaas loo samaynayana ay tahay curyaaminta Puntland iyo la go doomiyo UAE laga saaro sidaa daraadeed dadka Puntland waa inay fahmaan arimo badan oo Madaxwayne Dani xeerinayo isagoo eegaya Puntland intrestigeeda lana tashaday dad badan oo aqoonyahanka Puntland ah. Waxaan u sheegayaa shacabka Puntland ee xalaasha ah waxbadan waa kala miirmayaan mar dhow InshAllah ee aynu fahano umuuro badan oo jira kana cudurdaarno oo yaynaan probogandada cadowga Puntland iyo villa wardhiigley iyo waliba kuwa ay ku adeegtaan oo Farah Gaylan noo ninkii lacag ku shubtaaba ka dhex hadlo ah. Dekadeenii Bosaso ayay ku taalaa cidi ma qadan heshiiskii Gaas galay hadii dpworld fulinwaydo way iska tegaysaa.